Umbhede ongu-2, indawo yokugezela engu-1 izwakala njengokuqasha okunesevisi yasekhaya! - I-Airbnb
Umbhede ongu-2, indawo yokugezela engu-1 izwakala njengokuqasha okunesevisi yasekhaya!
U-Banner Stay unokuphawula okungu-739 kwezinye izindawo.
I-Cozy Apartment etholakala ku-Main St e-Beulah, ND!
I-Theater Apartments ivuselelwa ngemishini emisha, iphansi kanye nefenisha.
Indawo Enhle- Ifulethi lethu elithokomele, lilungele ukuqashwa kwesikhashana noma isikhathi eside (inyanga nenyanga, izinyanga ezi-3, izinyanga ezi-6, unyaka ongu-1). zonke izinsiza ezifakiwe kanye nekhebula ne-inthanethi, ukungena kwekhiphedi. Ilungele ukuhamba kwebhizinisi noma amaphrojekthi omsebenzi. Singahlinzeka ngenani elehlisiwe lokuhlala isikhathi eside.
Iyunithi ihlanganisa konke ongakudinga! Ikhishi elinefenisha ngokugcwele, eligcwele amabhodwe, amapani, izinto zesiliva, izitsha zokugeza izitsha nezinto zokuhlanza. Le yunithi nayo inezingubo zokulala eziphelele, namathawula endlini yokugezela!
Siyazijabulela izilwane ezifuywayo, kodwa sikhokhisa u-$200 ubuncane bemali yesilwane ngasinye. Ubuningi bezilwane ezifuywayo ezivunyelwe; 2.
Nakuba iyunithi yethu ine-A/C ayiyona i-A/C emaphakathi. Iyunithi yefasitela itholakala endaweni yokuhlala efulethini hhayi kunoma yimaphi amagumbi okulala. Uma uhlala ezinyangeni zasehlobo, ukushiya i-A/C yakho ivuliwe neminyango yegumbi lokulala ivuliwe kuzosiza ekupholiseni yonke indlu.
Itholakala edolobheni laseBeulah eliseduze nezindawo zokudlela nezitolo ezahlukahlukene!
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-R4793.